Tour Archives — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
भ्रमण भ्रमण भ्रमण भ्रमण भ्रमण भ्रमण भ्रमण भ्रमण भ्रमण भ्रमण भ्रमण भ्रमण भ्रमण भ्रमण
Unashamed अफ्रीका हामीलाई बाहिर मदत
अहिले यो छ 12:34 बोट्सवाना छु. यो अफ्रीका मा हाम्रो पहिलो पूर्ण दिनको र प्रभु काम पहिले देखि नै छ. सारा पहुंच चालक अन्तिम रात जोहानसबर्ग उतरा र यो बिहान बोट्सवाना गर्न उड्यो. हामी समर्थकहरूको टन एक साइनिङ हामी एक स्थानीय मसीही पुस्तक पसल मा गरे यो दिउँसो पूरा गर्न पाए र हामीले केही ठूलो साक्षात्कार थियो. भोलि साँझ भ्रमण को पहिलो कन्सर्ट हो र हामी amped छन्.
हामी साँच्चै यो भ्रमण फलदायी हुन चाहनुहुन्छ र हामी आफ्नो मद्दत प्रेम. तपाईं कसरी मदत गर्न सक्छ?
तपाईं पनि प्रार्थना गरेर हामीलाई मदत गर्नुपर्छ, भनेर धेरै आशिष लागि हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिन हुनेछ धेरै प्रार्थना हामीलाई प्रदान.
2 कोरिन्थी 1:11
हामी दृढ प्रभु उहाँको योजना पूरा गर्न आफ्ना जनहरूको प्रार्थना प्रयोग विश्वास. त्यसैले तपाईं हामीलाई प्रार्थना गरेर मदत गर्न सक्छ. यहाँ तपाईँले हाम्रो लागि र हामीलाई प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ केही आधारभूत तरिकाहरू छन्:
1. त्यो प्रभु हामीलाई स्वस्थ र बलियो राख्न थियो
2. हामी आफूलाई सेवकको रूपमा मुद्रा भनेर
3. त्यो संगीत राम्रो जाने
4. हामी टाढा हुँदा प्रभु त्यो हाम्रो परिवार रक्षा हुनेछ
5. त्यो ख्रीष्टको हामीले सबै मा उठाएर हुनेछ
Unashamed अष्ट्रेलिया रिक्याप
सप्ताह को एक जोडी पहिले म एलएएक्स देखि बन्द गरे र मेरो मनपर्ने मान्छे केही दुनिया को अन्य पक्ष गर्न लाग्यौं. Tedashii, प्रो, KB, Thi'sl, डीजे PDogg, हाम्रो भ्रमण प्रबन्धक Steadman, र म येशूको सेवा गर्न अष्ट्रेलिया लाग्यौं थिए.
के हामी गरे
हामी ब्रिस्बेन मार्फत यात्रा अन्तर्गत दुई हप्ता तल खर्च, मेलबोर्न, पर्थ, र सिडनी. यो शहर प्रत्येक हामी ठूलो संगीत देखि लिएर भाग थिए 5,000-10,000 युवा. यो संगीत अघि, हामी केही विद्यालय गए र शो तिनीहरूलाई बाहिर निमन्त्रणा. के हामी स्कूल को धेरै मा भन्न अनुमति थिए सीमित थियो (किनभने तिनीहरूले गैर-मसीही राज्य विद्यालय थिए), तर हामी विद्यार्थीहरू प्रोत्साहन र ख्रीष्टको तिनीहरूलाई दर्शाउन हाम्रो सबै भन्दा राम्रो गरे.
को संगीत मा, हामी सबै पाँच एक राउडी रूपमा चरण मारा, unashamed चालक. हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ कि सुसमाचार हामी के के गर्न बारेमा सकेसम्म स्पष्ट हुन प्रयास गर्दा हामी हाम्रो क्षमता को सबै भन्दा राम्रो गर्न ती चरणमा हलचल मच्चाएका. केहि भन्दा बढी हामी येशूको जान्न मान्छे चाहन्थे! हामी सधैं निश्चित मान्छे प्रभावित छोड्न बनाउन प्रयास, हाम्रो कौशल द्वारा, तर हाम्रा प्रभु द्वारा.
के हामी अनुभव